Nisy, omaly, ny lanonana namoahana tamin’ny fomba ofisialy mpanamory angidimby, notanterahina tao amin’ny foiben’ny Tafika anabakabaka Malagasy – Ivato Antananarivo. Manamboninahitra telo mirahalahy avy amin’ny Tafika anabakabaka Malagasy izy ireo, no nahavita fiofanana ka notolorana mari-pahaizana. Notsiahivin’ny Praiminisitra Ntsay Christian fa tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny fametrahana ny fandriampahalemana sy ny fitoniana ny fampitaovana sy fanatsarana ny fahaiza-manaon’ny mpitandro ny filaminana amin’ny ankapobeny, ary voakasik’izany ny Tafika anabakabaka. Nohazavain’ny Praiminisitra fa fampiharana ny paikady ho amin’ny fampandriana ny fahalemana ny nametrahana toby miaramila maro manerana ny Nosy, ka ahafahana manamora sy manafaingana ny fifandraisana an’ireny toby ireny ny fitaovana toy ny fiaramanidina na ny angidimby.
Sary nindramina sy Sary Gasypatriote Sambava
Nohamafisina ny fandraisana andraikitra sy ny fanamafisana fa voarara ny manao hitsin-dalana eto amin'ny « piste », na faritra fipetrahana sy fiaingan’ny fiaramanidina eto Sambava, fa saropady ary mampidi-doza. Olona miisa fito no efa nampidirina am-ponja, izay tsy noraisina ho sazy fa mba ho anatra ho azy ireo sy ho an’ny hafa izay mety mbola ho manana fikasana hanao hitsin-dalana eo. Dimy tamin'ireo fito dia zandary no nahasambotra azy, ny roa kosa voasambotry ny polisy. Mety mitarika fanakatonana ny seranam-piaramanidina ny tsy fahafehezana ny fisorohana ny loza, izay mety avy amin’ny tsy fitandreman’ny sasany toy itony mpanao hitsin-dalana itony.
« Ny Polisim-pirenena natao hiasa sy hiaro hanakaiky hatrany ny vahoaka » Ny eto anivon’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka dia manao izao fanambaràna izao manolona ny tranga mahakasika ny raharaha naharavana tambazotran-jiolahy tamin’ny marainan’ny zoma faha 23 ny volana aogositra 2019 lasa teo. Nahatsiaro tena ho nahavita ny adidy sy ny andraikitra manoloana ny fiaraha-monina ny fianakaviam-ben’ny Polisy raha nahasakana ny fanafihana izay nokasain’ireto jiolahy ireto notanterahana teo Antsahamanitra. Sahirana anefa raha niara-nahita tamin’ny be sy ny maro ny horonan-tsary izay nampiseho ny zava-nitranga teo Ampefiloha.
Tovolahy iray no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP Ihosy ny 17 aogositra lasa teo nahatrarana basy poleta « revolver ». Miezaka mifehy ny fampandriampahalemana aty amin’ny Distrikan’Ihosy ny Polisy miasa aty an-toerana. Vokatry ny fisafona nataon’izy ireo tao amin’ny fokontanin’ny Manjaka/Ihosy, dia lehilahy iray izay niafina tao ambadiky ny tranon’olona no nifanehatra tamin’ny mpitandro filaminana mpanao fisafoana. Nikasa hanatanteraka asa ratsy ity lehilahy ity no sainga nifanehitra tamin’ireo Polisy nanao fisafoana ka dia noraisi-potsiny. Nosamborina avy hatrany ity jiolahy ity niaraka tamin’ny basy poleta iray sy bala miisa 06, izay teny aminy. Ny alin’ny 17 aogositra lasa teo no nitrangan’izany. Nanentana ny vahoaka hatrany ny Talem-paritry ny Filaminam-bahoaka any Ihorombe amin’ny fanomezana loharanom-baovao ny Polisy raha vao mahita trangan-javatra hafahafa.
Lehilahy miisa 02 no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP3 Antaninandro ny alarobia 23 aogositra teo teny amin’ny faritra Andraisoro noho ny antony fanendahana. Vehivavy iray no voahendaka teny Andraisoro ny alin’ny alakamisy 08 aogositra lasa teo, raha sendra nody alina. Niezaka nanohitra anefa io vehivavy io ka na dia lasan’ilay mpanendaka aza ny fananany dia voasintony kosa ny kitapo kely teny am-baben’ity mpanendaka azy. Ny marainan’ny zoma 09 aogositra kosa dia tonga nametraka fitarainana teo anivon’ny kaomisarian’ny boriborintany fahatelo ilay vehivavy voahendaka, ary natolony ireo polisy ilay kitapo azony tamin’ilay mpanendaka.
lundi, 26 août 2019 14:01
Ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana: Nohatevenina ny fitaovana, homena « motivation » ny mpitandro ny filaminana
Tonga nametraka ny vato fototra hanamboarana ny « Base opérationnelle avancée » tao Tsaratanàna faritra Betsiboka ny filoha Andry Rajoelina ny 23 aogositra 2019. Trano handraisana vondro-tobin-tafika izay mahazaka vata miaramila miisa eo amin’ny 84, ary ahitana toby fametrahana fitaovana sy toerana hipetrahan’ny angidimby izy ity. Nambarany fa hohamafisina ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ary mba ho fampirisihina ny mpitandro ny filaminana dia hapetraka ny fitantanana miainga amin'ny fanomezana valisoa sy tambiny na « motivation » ho an'ireo izay mahatanteraka ny asa ankinina aminy.
Nahatratra tranga fisolokiana ny tao amin’ny Polisy miasa ao amin’ny sampana « cybercriminalité » Anosy. Nisy lehilahy 17 taona nifanoratra tamina tovovavy iray voalaza fa tsara tarehy tao anaty « facebook ». Rehefa nifampiresaka elaela izy ireo dia nifampitory fitia ary nifanao fotoana. Noho ny tonga ny ora sy ny toerana voatondro nifanomezana dia nilaza ilay tovovavy fa tsy afaka fa mbola manao douche fa ny anadahiny no hitsena ilay tovolahy. Tonga tokoa ilay nolazaina fa anadahiny ary nampandroso ilay tovolahy tany an-trano. Rehefa tafiditra ny varavarana dia nivadika ny resaka. Norahonan’ity milaza fa anadahin’ilay tovovavy ilay tovolahy, ka nilaza ity tovolahy nandrahona fa zanaka mpitsara ny anabaviny, no sady tsy ampy taona ihany koa.
Tovolahy tsy ampy taona miisa 02 sy lehilahy iray, 21 taona no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP3 Antaninandro ny alarobia faha 21 aogositra teo teny amin’ny faritra Mahavoky noho ny fitondràna rongony 01 fonosana lehibe. Polisy nanao fisafoana teny amin’ny faritra Andravoahangy sy ny manodidina no nifanena tamina tovolahy 15 taona sy 16 taona ary lehilahy 21 taona teo Mahavoky tamin’io alarobia io, tokony ho tamin’ny 08 ora alina. Nanapa-kevitra ny hanakana sy hisava ireto telo lahy ireto ny Polisy, ka rongony 01 fonosana lehibe, fantatra amin’ny anarana hoe « karaoty » no tra-tehaka tany amin’izy ireo.
Ny 20 aogositra 2019 dia tovolahy iray 30 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP ALASORA teny Ankadindratombo, resaka halatra «batterie » anà fiara. Anisan’ny mampitaraina ny mponina eny amin’iny faritra Ankadindratombo sy ny manodidina iny ny fahaverezana bateria mipetaka amina fiara toy izao. Amin’ny alina ireto olon-dratsy ireto no manao ny asa ratsiny, ary tsy mionona fotsiny amin’ny fangalarana ny bateria izy ireo fa mbola manao fanahy iniana ihany koa manimba ny kojakoja rehetra sy ny piesy izay sendra azy ireo ao, toy ny halatra miaro figafiana izany.